Madaxweynaha Somaliland oo kulamo la qaadanaya wafuud caalami ah oo tageysa – Somali Top News
Madaxweynaha Somaliland oo kulamo la qaadanaya wafuud caalami ah oo tageysa
May 7, 2019 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynaha Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabiley wasiir ku xigeenka arrimaha dibeda dalka Masar, Mr. Xamdi Sanad Luza oo booqasho ku jooga magaalada Hargeysa.
Waxaana kulankaasi lagaga wada hadlay adkaynta xidhiidhka Somaliland iyo dalka Masar, taariikhda faca-weyn ee ay wadaagaan labada dhinac, arrimaha ganacsiga, xoolaha iyo kalluunka, waxbarashada iyo isdhex-galka xidhiidhka labada shacbi.
Dhinaca weftigan waxa wasiir ku xigeenka ku wehelinaayey, safiirka dalka aynu jaarka nahay u fadhiya Masar, Amb. Maxamed Nasr iyo kaaliyaha wasiirka arrimaha geeska ee dalkaasi Masar, Amb. Mohamed Karim Sharif. Waxaanay weftigu dalka ku sugnaan doonaan maalmo kooban iyagoo booqan doona goobo kala duwan oo muhiima.
← Oil tanker owners negotiating with abductors of five Indian sailors
War-murtiyeed laga soo saaray shirka Golaha Horumarinta Qaranka ee Garoowe lagu qabtay →
Mareykanka iyo Soomaaliya oo is-afgarad kale ka gaaray dagaalka Al shabaab
Ra’isul Wasaare Kheyre Oo Ka Hadlay Khilaafka Kala Dhaxeeya Madaxda Puntland
August 4, 2018 Somali Top News 0
Aadan Ducaale oo Soomaaliya ugu baaqay iney ka tanaasusho dacwadda Badda ee Kenya kala dhaxeysa!